ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့) NLD အား ကော်မရှင်မှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့) NLD အား ကော်မရှင်မှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့) NLD အား ကော်မရှင်မှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
- King of Secrets (Bo Min)
Posted by King of Secrets (Bo Min) on Jun 29, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 10 comments
မြန်မာနိုင်ငံအား BURMA ဟု မခေါ်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် NLD အား အသိပေး
ယနေ့ ၂၉.၆.၂၀၁၂ ရက်နေ.၊ သတင်းစာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က NLD အား မြန်မာနိုင်ငံကို ဘားမား “BURMA” ဟု မခေါ်ဆိုရန် အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ NLD ပါတီသည် အခြေခံဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာပါမည်ဟု ကျမ်းကျိန်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံဥပဒေတွင် ဒီနိုင်ငံအား ပြည်ထားစု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ( The Republic of the Union of Myanmar) ဟု ခေါ်ဆိုရန် အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သို.သော် NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ World Economic Forum တွင် တစ်ကြိမ်၊ အနောက်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်များတွင်လည်း မိန်.ခွန်းပြောသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံအား ဘားမား (BURMA) ဟု အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ထို.ကြောင့် နောင်အခါတွင် ခေါ်ခွင့်မရှိသည့် ဘားမား ဟူသော အမည်ကို မခေါ်ရန်နှင့် Republic of the Union of Myanmar (သို့) Myanmar ဟုသာ ခေါ်ဆိုပါရန် အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မများအရ အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်းသိရသည်။
About King of Secrets (Bo Min)
King of Secrets (Bo Min) has written 12 post in this Website..
I amaguy and was born in 9.9.1995. I love all my contributors. Comment my posts, Thanks you. I will also comment your posts as and when necessary. My g mail account is bominaung.aung95@gmail.com. Contact me if you wish.
View all posts by King of Secrets (Bo Min) →
This news has been announced in New Light of Myanmar today.
စာအုပ်က အတော်ကိုကြာနေပါပြီ စာအုပ်အမည်က ဘုံဘေဘားမား တဲ့။
ဒီအတိုင်းဆို အဲဒီစာအုပ်အဖုံးကိုပြန်လဲရတော့မှာပေါ့နော် ဘုံဘေမြန်မာ လို့။
ကော်မရှင်ကြီးရယ် နာမည်ပြောင်းတာထက် လူတွေပြောင်းပေးပါနော် လေးစားစွာဖြင့်………….
မစ္စတာဗိုလ်မင်း ရွာထဲမှာအေးဆေးမနေချင်ဘူးလား ပြောစနိုးသိပ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးနော် ဗိုလ်မင်းကို သတိထားနေ စနိုး ဗိုလ်မင်းကိုသတ်မိတော့မယ် ထမင်းကိုနေ့တိုင်းဝအောင်စားထား ဟွန်းပြောကိုမပြောချင်ဘူး ရွာသူ/သားတွေအငြင်းပွားအောင်လာလုပ်နေတယ် ဟုတ်လားအမေစုစာတက်တယ်ပြောင်းခေါ်လိမ့်မယ် ပူမနေနဲ့ ဟုတ်ပီလား ။
ဟယ်တော့ .. အံ့သြလွန်းလို့ … အူတတ်အောင် ရယ်မိတော့မယ် … ။
အနောက်နိုင်ငံ အရှေ့နိုင်ငံ အကုန်လုံးက အခုထက်ထိ … Myanmar ထက် Burma ဆိုတာကို ပိုပြီးတွင်ကျယ်စွာသုံးခဲ့ကြတယ် … Burma တုန်းက .. ကမ္ဘာမှာ နာမည်ရခဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့တာဆိုတော့ …. ။
အခုမြန်မာဆိုတာကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမလုပ်တဲ့ ..သူတို့နိုင်ငံက လူတချို့ မသိကြဘူး … ။
အဲ့လို လူတွေ နားလည်ဖို့ဆိုလျှင် … မြန်မာရော ၊ ဘားမားရော နှစ်မျိုးစလုံး သုံးပြီးပြောမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် … ။ ဘားမားကနေ ..မြန်မာဖြစ်ပြီး … ကမ္ဘာ့ လူထုသိအောင် မကြော်ငြာ မစွမ်းဆောင်ပဲ .. နာမည်ကိစ္စ ပြသနာလာရှာနေတယ် …. ။ ဒီစိတ်တွေနဲ့ ဆို .. … အင်း ……….. ရင်မောတယ် …
ကျွန်တော့အလုပ်ထဲကလူတွေကို Myanmar ကလာတာပါလို့ပြောရင် Myanmar ဆိုတာဘယ်မှာလဲဆိုသူသိသူလုံးဝမရှိ။ Bumra ဆိုရင်သိတဲ့သူနဲနဲရှိ။ Aung San Suu Kyi တို့တိုင်းပြည်ကဆို အားလုံးနီးနီးကသိကြပါတယ်။